Godinsa shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galanittii waldaan barattoota mana barumsaa Ijjaajji duraanii barattoota maatii harka qalleeyyii 153 ta’aniif deeggarsha meesshaalee barnootaa qarshii kuma 39 ol ta’uu deeggareera .
Dambii waldaa Dubbisuuf
Duudhaalee Waldaa BID
Beekumsaa fi amantaan tajaajilu
Ful.16,2012-Godina Shawaa Lixaatti hojiin tajaajila Lammummaa ammas cimee itti fufeera
Waldaan Keenya Bara darbee irraa kaasee deggarsa adda addaa taasisuun cinatti barattoota harka qalleeyyii 102 ta’an yuunifoomii fi Dabtara bituufin kan barsisaa jira.
Raawwii bara 2012 fi karoora bara 2013 kan waldaa Barattoota mana barumsaa ijaajjii duraaniitiin qophaa'e
Phone no.: 0937522110
CBE Acc:- 1000321602437
OIB Acc:- 3474380
LAMMII TA’UUN GAARIDHA; GARUU, LAMMIIF TA’UUN SANAA OLI
Aanichatti guyyaa kaleessaa deeggarsii meeshalee barnootaa kanneen akkaa barullee fi qalamaa qarshii 39,174 ta’uun bitamee waldaa barattoota mana barumsaa ijaajjii duraaniin dhiyaate barattoota maatii harka qalleeyyii 153 ta’aniif qoodameera . meeshaleen barnoota kenname kunis dhuunfaan baruullee darzana tokko tokkoo fi qalama ja’a ja’a ta’uu hubatameera.
I/G Waajira Barnoota aanichaa kan ta’an obbo Tafarii G/Sillassee deeggarsa waldaan barattootta mana barumsa ijjaajjii duraanii tasisan galateeffatanii kaayyoo fi mul’annii waldaan kun qabatee sochoo ‘aa jiru kun maatiin sababa hawaasummaatiin daa’imman maatii harka qalleeyyii barumsa akka hin dhaabnee ta’uu hubatanii maatiin daa’immaan isaanii seeraan barumsa isaanii akka hordofan taasisuu akka qaban hubachiisaniiru.
Barachuun ofiif jiraachuu caalaa lammiif jiraachuun akka jiru waldaa barattootaa mana barumma ijaajjii duraanii irraa hubachuu danda’ameera kan jedhan immoo I/G waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa aanichaa kan ta’an obboo Fayyisaa Walduu ti. obbo Fayyisaan akka jedhanitti, waldaan kun deeggarsi isaan taasisaa jiran har’a kan eegale ta’uu baatus guuyya har’aa kana illee lammii dhaqabuu qaban dhaqqabuu danda’aniiru; ijoollee maatii harka qalleeyyii guyyaa har’aa deeggarsi meeshalee barnootaa taasisame keessaa 26 barattoota qaama miidhamtootadha . ijjoolleen kun deeggaramuun immoo fuuldurrii isanii gaarii akka ta’ee agarsiiseera waan ta’eef deeggarsa waldaan kun taasiseef Waajjiirri Dhimma Hojjetaa Fi Hawaasummaa galataa fi fulfina guddaa kan qabuuf ta’uu dubbatanii jiru .
Maatiin ijoollee deeggarsi tasisameef gammaachuu kan qabanii fi waldaan barattoota ijaajjii duraanii abdii egeree isaanii kan ta'u himaniiru
Maddi :-Kominikeeshinii Aanaa IluuGalaan
Waldaan Barattootaa Mana barumsa Ijaajjii Duraanii Erga Hundaa'ee qaama seerummaa argatee Hojiiwwan gurguddoo hojjetaa jira.
Designed by MY.